LV အိတျပဲ လကျဆောငျရလို့ စိတျဆိုးသှားတဲ့ ကောငျမလေး
HomenewsLV အိတျပဲ လကျဆောငျရလို့ စိတျဆိုးသှားတဲ့ ကောငျမလေး
ကောငျမလေးတဈယောကျကတော့ ရညျစားကောငျလေးက SGD -၇၀၀ ( ဒျေါလာ- ၅၀၀) တနျတဲ့ အိတျတဈလုံး လကျဆောငျပေးလို့ စိတျဆိုးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကို ဈေးပေါတဲ့ ဆိုငျတှမှောပဲ လိုကျကြှေးပွီးတော့ လကျဆောငျကို ဈေးကွီးတာ ပေးလို့ပါ။ ပွီးတော့ ကောငျမလေးရဲ့ အဈမရညျးစားကတော့ သူ့အဈမကို အမွဲတမျး အစားကောငျး အသောကျကောငျး ကြှေးပွီးတော့ လကျဆောငျတှလေညျး အမွဲတမျး ပေးနလေို့ပါ။
ဒီကိစ်စဟာ လိုငျးပျေါမှာ ပွနျ့သှားပွီးတော့ လူအမြားစုကတော့ အိတျဝယျပေးတဲ့ကောငျလေးဘကျကနပေဲ ထောကျခံပေး ခဲ့ကွပါတယျ။ ပွီးတော့ ကောငျမလေးက ကောငျလေးကို ခဈြတာမဟုတျဘဲ ဂုဏျတှေ၊ ပိုကျဆံတှကေိုပဲ မကျတာလို့ ပွောနကွေပါတယျ။
လူတှဟော တဈစုံတဈယောကျဆီကနေ လကျဆောငျရတယျ ဆိုရငျ ဝမျးသာကွပါတယျ။ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ ပေးပေး ပြျောကွပါတယျ။ အစားအစာပေးပေး၊ အရုပျလေးပေးပေး ကွီးတာဖွဈဖွဈ သေးတာဖွဈဖွဈ ဂြီးမမြား ကွပါဘူး။ ဒီမိနျးကလေးကတော့ ဂွိုဟျသားလား ဆိုတာတော့ မပွောတတျပါဘူး။
မကွာသေးမီကမှ စငျကာပူနိုငျငံမှာ ဖွဈခဲ့တာပါ။ ကောငျမလေးက သူ့ကောငျလေးကို ကပျစေးနညျးတယျလို့ လူတိုငျးကို သိအောငျ ပွောပွထားတာပါ။ ကောငျလေးက အမွဲတမျး ဈေးပေါတဲ့ အစားအစာတှေ ကြှေးလို့ ကပျစေးနညျးတယျလို့ ပွောတာပါ။ ကောငျလေးကတော့ ကပျစေးမနညျးဘဲ ကောငျမလေးကို LV တံဆိပျ အိတျတဈလုံးကို လကျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို ကောငျမလေးက မကမြေနပျ ဖွဈခဲ့တာပါ။
ကောငျမလေးက ကောငျလေးကို မကနြေပျတာက LV အိတျပေးလို့ပါတဲ့။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့အဈမရဲ့ ရညျးစားက သူ့အဈမကို Chanel အိတျပေးတယျ။ သူ့ကတြော့ LV အိတျပဲပေးလို့ စိတျဆိုးခွငျး ဖွဈပါတယျလို့ ပွောပါတယျ။ Chanel အိတျက SGD 1,000 (ဒျေါလာ ၇၃၀) တနျပါတယျ။
ကောငျမလေး လိုငျးပျေါတငျထားတာကတော့ ' Chanel အိတျက LV အိတျထကျ အမြားကွီး ပိုခဈြဖို့ကောငျးပါတယျ။ LV အိတျဆိုတာက ပိုကျဆံမရှိတဲ့ ဆငျးရဲတဲ့ သူတှပေဲ ကိုငျတာ ' လို့ တငျထားတာပါ။
ကောငျမလေးကတော့ လကျဆောငျ ပစ်စညျးတှကေို နှိုငျးယှဉျတာနဲ့တငျ မပွီးသေးပါဘူး။ စင်ျကာပူမှာ Lock Down ကာလပွုလုပျတုနျးက သူ့အဈမကို အဈမရညျးစားက Crystal Jade နှငျ့ Paradise Dynasty လိုမြိုး ဆိုငျကွီးတှကေ အစားအသောကျကောငျးတှကေို မှာပွီးကြှေးတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ကောငျမလေးကိုကတြော့ Swensen's နှငျ့ Ichiban လိုမြိူးဆိုငျက အစားအသောကျတှပေဲ ကြှေးတယျလို့ ပွောပါတယျ။
တကယျတမျးတော့လညျ ဒီဆိုငျတှကေ သိပျမကှာပါဘူး။ အလယျအလတျတနျးစားတှေ စားသောကျနိုငျတဲ့ ဆိုငျမြိုးတှပေါ။ ဒါကို ကောငျမလေးက သူ့အတှကျဆို ဈေးပေါတာပဲ လုပျပေးတာလို့ ထငျနပေါတယျ။
ကောငျမလေးရဲ့ ရညျးစားက တဈလကို SGD -5000 ( ဒျေါလာ- ၃၆၀၀) ရပွီးတော့ ကောငျမလေးအဈမဖွဈသူရဲ့ ရညျးစားက SGD - 4000 (ဒျေါလာ- ၂၉၀၀) သာရပါတယျ။ ကောငျမလေးရဲ့အဈမဖွဈသူက ရညျးစားဆီကနေ လစဉျSGD -1000 (ဒျေါလာ- ၇၃၀) ရပွီးတော့ စိတျဆိုးတဲ့ ကောငျမလေးကတော့ ထကျဝကျပဲ ရပါတယျ။
ကောငျမလေးကို ပိုကျဆံပေးသငျ့လား ?
တခြို့လေးနကျတဲ့ ဆကျဆံရေးတှမှော ကောငျလေးတှကေ သူတို့ကောငျမလေး သုံးဖို့အတှကျ ပိုကျဆံတှေ ပေးထားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလုပျခွငျးဟာ နှဈယောကျရှရေ့ေးအတှကျ စုဆောငျးထားခွငျးမြိုး ဖွဈသလို တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျ ပိုနားလညျစပေါတယျ။
ဒီလိုပေးတာဟာ ရညျးစားတှဲခပေးတာမြိူး မဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုပေးလို့ အဆငျပွတေဲ့ စုံတှဲမြိူးရှိကွသလို ငှရေေးကွေးရေးနဲ့ပတျသကျပွီး ပွဿနာတကျရတဲ့ စုံတှဲတှလေညျး အမြားကွီးပါ။
အဓိကအခကျြကတော့ နှဈယောကျသား နားလညျမှု ရှိနဖေို့ပါပဲ။ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျသာ နားလညျပေးနိုငျရငျ ဒီလို ကိစ်စတှကေ အသေးအဖှဲပါပဲ။
LV အိတ်ပဲ လက်ဆောင်ရလို့ စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ ကောင်မလေး
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ ရည်စားကောင်လေးက SGD -၇၀၀( ဒေါ်လာ- ၅၀၀)တန်တဲ့ အိတ်တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးလို့ စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ကိုဈေးပေါတဲ့ ဆိုင်တွေမှာပဲ လိုက်ကျွေးပြီးတော့ လက်ဆောင်ကို ဈေးကြီးတာပေးလို့ပါ။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အစ်မရည်းစားကတော့ သူ့အစ်မကို အမြဲတမ်း အစားကောင်း အသောက်ကောင်း ကျွေးပြီးတော့ လက်ဆောင်တွေလည်း အမြဲတမ်း ပေးနေလို့ပါ။
ဒီကိစ္စဟာ လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်သွားပြီးတော့ လူအများစုကတော့ အိတ်ဝယ်ပေးတဲ့ကောင်လေးဘက်ကနေပဲ ထောက်ခံပေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ချစ်တာမဟုတ်ဘဲ ဂုဏ်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေကိုပဲ မက်တာလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
လူတွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကနေ လက်ဆောင်ရတယ် ဆိုရင် ဝမ်းသာကြပါတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့် ပေးပေး ပျော်ကြပါတယ်။ အစားအစာပေးပေး၊ အရုပ်လေးပေးပေး ကြီးတာဖြစ်ဖြစ် သေးတာဖြစ်ဖြစ် ဂျီးမများ ကြပါဘူး။ ဒီမိန်းကလေးကတော့ ဂြိုဟ်သားလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။
မကြာသေးမီကမှ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကောင်မလေးက သူ့ကောင်လေးကို ကပ်စေးနည်းတယ်လို့ လူတိုင်းကို သိအောင် ပြောပြထားတာပါ။ ကောင်လေးက အမြဲတမ်း ဈေးပေါတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးလို့ ကပ်စေးနည်းတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ကောင်လေးကတော့ ကပ်စေးမနည်းဘဲ ကောင်မလေးကို LV တံဆိပ် အိတ်တစ်လုံးကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ကောင်မလေးက မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို မကျေနပ်တာက LV အိတ်ပေးလို့ပါတဲ့။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့အစ်မရဲ့ ရည်းစားက သူ့အစ်မကို Chanel အိတ်ပေးတယ်။ သူ့ကျတော့ LV အိတ်ပဲပေးလို့ စိတ်ဆိုးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Chanel အိတ်က SGD 1,000 (ဒေါ်လာ ၇၃၀) တန်ပါတယ်။
ကောင်မလေး လိုင်းပေါ်တင်ထားတာကတော့ ' Chanel အိတ်က LV အိတ်ထက် အများကြီး ပိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ LV အိတ်ဆိုတာက ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေပဲ ကိုင်တာ ' လို့ တင်ထားတာပါ။
ကောင်မလေးကတော့ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်တာနဲ့တင် မပြီးသေးပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာ Lock Down ကာလပြုလုပ်တုန်းက သူ့အစ်မကို အစ်မရည်းစားက Crystal Jade နှင့် Paradise Dynasty လိုမျိုး ဆိုင်ကြီးတွေက အစားအသောက်ကောင်းတွေကို မှာပြီးကျွေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကောင်မလေးကိုကျတော့ Swensen's နှင့် Ichiban လိုမျိူးဆိုင်က အစားအသောက်တွေပဲ ကျွေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့လည် ဒီဆိုင်တွေက သိပ်မကွာပါဘူး။ အလယ်အလတ်တန်းစားတွေ စားသောက်နိုင်တဲ့ ဆိုင်မျိုးတွေပါ။ ဒါကို ကောင်မလေးက သူ့အတွက်ဆို ဈေးပေါတာပဲ လုပ်ပေးတာလို့ ထင်နေပါတယ်။
ကောင်မလေးရဲ့ ရည်းစားက တစ်လကို SGD -5000 ( ဒေါ်လာ- ၃၆၀၀) ရပြီးတော့ ကောင်မလေးအစ်မဖြစ်သူရဲ့ ရည်းစားက SGD - 4000 (ဒေါ်လာ- ၂၉၀၀) သာရပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့အစ်မဖြစ်သူက ရညည်းစားဆီကနေ လစဉ်SGD -1000 (ဒေါ်လာ- ၇၃၀) ရပြီးတော့ စိတ်ဆိုးတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ထက်ဝက်ပဲ ရပါတယ်။
ကောင်မလေးကို ပိုက်ဆံပေးသင့်လား ?
တချို့လေးနက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ကောင်လေးတွေက သူတို့ကောင်မလေး သုံးဖို့အတွက် ပိုက်ဆံတွေ ပေးထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ နှစ်ယောက်ရှေ့ရေးအတွက် စုဆောင်းထားခြင်းမျိုး ဖြစ်သလို တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ပိုနားလည်စေပါတယ်။ ဒီလိုပေးတာဟာ ရည်းစားတွဲခပေးတာမျိူး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပေးလို့ အဆင်ပြေတဲ့ စုံတွဲမျိူးရှိကြသလို ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတက်ရတဲ့ စုံတွဲတွေလည်း အများကြီးပါ။
အဓိကအချက်ကတော့ နှစ်ယောက်သား နားလည်မှု ရှိနေဖို့ပါပဲ။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်သာ နားလည်ပေးနိုင်ရင် ဒီလို ကိစ္စတွေက အသေးအဖွဲပါပဲ။